नेपाली नानो स्याटलाइटले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न थाल्यो, ग्राउण्ड स्टेसन भने बनेकै छैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नेपाली नानो स्याटलाइटले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न थाल्यो, ग्राउण्ड स्टेसन भने बनेकै छैन
असार २, २०७६ गोविन्द पोखरेल
काठमाडौँ — नेपालको पहिलो भू–उपग्रह ‘नेपाली–स्याट–१’ सोमबारदेखि अन्तरिक्षको परिक्रमा लगाउन सुरु गरेको छ । दुई महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्पेश स्टेसन(आईएसएस)मा रहेको भू–उपग्रहलाई सोमबार अपरान्ह ४ बजे ‘स्पेश’मा ‘डिप्लोइमेन्ट’ गरिएको हो ।
नेपाल सहित श्रीलंकाको रावना–१ र जापनको उगिसू भू–उपग्रह अन्तरक्षिमा सँगै छाडिएको हो । यो स्याटलाइट पृथ्वीको तल्लो अन्तरिक्ष कक्षलाई परिक्रमा गर्ने भूउपग्रह निर्माता एवं नाष्टका प्राविधिक हरिराम श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए ।
उनका अनुसार स्याटलाइटलाई ४२० किलोमिटरको रेन्जमा डिप्लोइमेन्ट गरिएको हो । भूउपग्रहले आईएसएससँगै परिक्रमा गरिरहने उनले जानकारी दिए । स्याटलाइट जुन देशको नजिक पर्छ त्यही रहेको ग्राउण्ड स्टेसनसँग सञ्चार गर्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपालमा दैनिक ४ पटकसम्म देखिने यो स्याटलाइटले नेपाली आकाशमा ४० मिनेट बिताउनेछ । ग्राउण्ड स्टेसनबाट हरेक पटकको डाटा लिने र कमान्ड दिन सकिने उनले सुनाए । स्याटलाइटले लोअर अर्बिट परिक्रमा गर्न ९० मिनेट लगाउनेछ भने सूर्यको प्रकाशमा ६० मिनेट र बाँकी समय अँध्यारो र चिसो क्षेत्रमा रहनेछ ।
ग्राउण्ड स्टेसन अहिलेसम्म तयार भएन
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभएपनि अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि निर्मित भूउपग्रहबाट पठाइएको तथ्याङ्क सङ्कलन लागि चाहिने ग्राउण्ड स्टेसन निर्माण अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । नाष्टले गत चैत १९ गते उपकरण खरिदका लागि भनेर २१ दिनको सूचना निकालेर बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । तर दुई महिना बितिसक्दा समेत ग्राउण्ड स्टेसन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
नाष्ट स्रोतका ग्राउण्ड स्टेसनका लागि चाहिने रोटेटर उल्टो परेपछि स्टेसन निर्माण ढिलाइ भएको हो । तथ्याङ्क सङ्कलन अन्य देशमा रहेका ग्राउण्ड स्टेसनबाट हुनेछ । भुटान र बंगादेशका ग्राउण्ड स्टेसनले तथ्यांयक संकलनमा सहयोग गरिदिने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यो स्याटलाइट के गर्छ ?
यो भूउपग्रह ठुलो नभएर नानो भू–उपग्रह हो । यो १यू–क्यूब–स्याट (लम्बाई,चौडाइ र उचाइ १०/१० सेन्टिमिटर भएको) नानो स्याटलाइट हो । ‘स्याटलाइट सर्भिस ओरिन्टेट नभएर डेमोनस्ट्रेसन र रिसर्च ओरिन्टेट हो ।’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँगको फोन कुराकानीमा भने । अहिले स्याटलाइटले तस्बिर लिन सक्ने नाष्टले जनाएको छ । अन्तरिक्षमा चुम्बकीय शक्तिको अध्ययन गर्न र रिमोट सेन्सिङ र अन्य सामन्य किसिमका काम मात्र गर्न सकिनेछ ।
‘नेपाली झन्डा भएको पहिलो वस्तु अन्तरिक्ष पुग्नु नै उपलब्धि’
यसैबिच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिराजमणि पोखरेलले बर्डस कार्यक्रममा आबद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । भू–उपग्रह आईएसएसबाट अन्तरिक्ष छाडिएको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न जापान पुगेका मन्त्री पोखरेलले भने,‘ सानै भएपनि नेपाली झन्डा अंकित स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पुग्नु नै एउटा ठूलो सफलता हो । आगामी दिनहरूमा हामी सहकार्य गरेर अझ राम्रो काम गर्न सक्छौँ ।’
मन्त्री पोखरेलले क्यूटेकसँग भविष्यमा पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । क्यूटेकले हालसम्म १८ वटा स्याटलाइट अन्तरिक्षमा छाडिसकेको छ ।
नेपाल स्पेस एजमा प्रवेश गर्‍यो, ऊर्जा मिलेको छ : नास्ट
यसैबीच नास्टले नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको बताएको छ । ‘स्याटेलाइट डिप्लोइमेन्ट भएपछि नेपाल स्पेस युगमा प्रवेश गरेको छ,’ नास्टका उपकुलपति डा. श्रेष्ठले भने, ‘यो ऐतिहासिक क्षणले हामीलाई हर्षित तुल्याएको छ ।’ आगामी दिनमा स्पेस टेक्नोलोजीलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे नास्टले सोचिरहेको उनको भनाइ छ । सोमबार पृथ्वीको तल्लो अन्तरिक्ष कक्षमा छाडिएको स्याटेलाइट ‘स्वस्थ’ रहेको उनले जानकारी दिए । केही दिनसम्म त्यो ‘अब्जर्भसेन’ मै रहने उनले बताए ।
प्रकाशित : असार २, २०७६ १७:२२
फेसबुक स्ट्याटसका कारण पुन: विवादमा तानिए क्याप्टेन विजय लामा, जापान भ्रमण टोलीबाट नाम हटाइयो
काठमाडौँ — फेसबुकमा सरकारविरुद्ध स्ट्याटस लेखेपछि नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले क्याप्टेन विजय लामालाई जापान भम्रणको टोलीबाट हटाएका छन् ।
निगमका अनुसार, आउँदो भदौ १२ गतेदेखी जापानको ओशाका उडानको तयारी गरिरहेको निगमको टोलीमा पाइलट लामासहित तीन सदस्य सोमबार बैंकक हुँदै जापान जाने कार्यक्रम थियो । थाई एयरवेजको उडानबाट निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलसहित, वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहाल र पाइलट लामा त्यसतर्फ जान लागेका थिए ।
निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, तीनै जनाको होटल बुकिङ र टिकट पनि भइसकेको थियो । कार्यक्रम एक साता लामो थियो । तर, पाइलट लामाले आफ्नो फेसबुक पेजमा सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्ध स्ट्याटस लेखेपछि उनलाई टोलीबाट हटाइएको निगमको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।
लामाले स्टाटसमा सरकारको काम, कदम र व्यवहारले नेवार समुदायमात्र नभई सम्पुर्ण समुदायलाई आतंकित बनाइरहेको बताउँदै लेखेको छन्, ‘दुई तिहाईको सरकार हो भनेर जनतालाई पेलेर जान्छौं अनि पेल्नै पर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेको त होइन ?’ सरकार स्वामित्वको ध्वजाबहाक वायुसेवा कम्पनीमा कार्यरता उनले आगाडि लेखेका छन्, ‘त्यस्तो चाँही नाहोस् पनि किनकी जुन दिन नेपाली जनताले सडकमा उत्रेर एक स्वरमा विरोध गर्छन् त्यतीबेला इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि बचाउन सक्दैन कसैलाई ।’
शनिबार ३ बजे उक्त स्ट्याटस पोष्ट गरिएको थियो । निगमका केही उच्च अधिकारीहरुले कार्यकारी अध्यक्षलाई सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेले सरकारकै विरोध गरेको सुहाएन भनेर गुनासो गरेपछि आइतबार बिहान कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले उनलाई बोलाई भम्रण दलबाट हटाएको जनाकारी दिएको स्रोतले बतायो ।
‘तपाईंको स्ट्याटसले मलाई अप्ठ्यारो पर्छ नजानुहोस् भन्नुभयो,’ पाइलट लामाको भनाई उद्धृत गर्दै एक अर्का निर्देशकले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले भनेपछि मैले हुन्छ भने ।’
यसैबीच लामाले हङकङममा भइरहेको प्रदर्शनको समाचार सामग्री शेयर गर्दै मण्डलामा बुधबार हुने सरकार विरुद्धको प्रर्दशनमा आफू जान लागेको र अन्यलाई पनि आव्हान गरेका छन् । पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सरकार विरद्ध फेसबुकमा लेख्न नमिल्ने बताउँदै आचारसंहिता लागु हुने बताए ।
‘नेपाल सरकारको संस्थाका कर्मचारीले सरकार विरुद्ध लेख्न मिल्दैन । आचारसंहित लागु हुन्छ । यसबारे कारवाही गर्ने कानुन रहेको र कारवाहीको अधिकार तोकिएकै छ,’ पर्यटन सचिव सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने ।
लामा बारम्बार आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिन्छन् । यसअघि बैशाखमा हवाई सुरक्षालाई असर पर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका पाइलट विजय लामालाई नेपाल वायुसेवा निगमले प्रवक्ताको जिम्मेबारीबाट हटाएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लामालाई ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले लामालाई प्रवक्ताबाट हटाएका थिए ।
चैत १९ गते राति निगमको दुबई उडान रद्दबारे पाइलट लामाले यूट्युब च्यानलमार्फत ‘आफ्नो मानसिक र शारिरीक अवस्था ठिक नभएको’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई प्राधिकरणमाहत सिनामंगलमा रहेको फलाइट सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड विभागले स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालय एयरलायन्सको जहाज चार्टर गरेको विषयमा पनि लामाले सरकार विरुद्ध स्ट्याटस लेख्दा विवादमा तानिएका थिए । त्यसताका निगमका प्रमुख सुगतरत्न कशांकारले लामालाई सम्झाई बुझाई बचाउ गरेको निगमका एक अधिकारीले बताए ।
निगमका प्रवक्ता नवराज कोइरालाका अनुसार, जापान गएको टोलीले भदौ देखी तोकिएको उडानबारे जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो, ग्राउन्डह्याण्डिङ्ग, मेन्टीनेन्स लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । यो टोली आइतबार नेपाल फर्किने छ ।
प्रकाशित : असार २, २०७६ १७:२१